प्रदेश २ मा धान उत्पादन बढ्ने आकलन, धनुषा प्रदेशकै अब्बल – खोज केन्द्र
» अर्थ » प्रदेश » समाचार » समाज अंक: 4765
प्रदेश २ मा धान उत्पादन बढ्ने आकलन, धनुषा प्रदेशकै अब्बल
किन उत्पादन कम हुन्छ ?
कमलेश ठाकुर मंगलबार, भाद्र १६, २०७७ मा प्रकाशित
जनकपुरधाम । समयमा पर्याप्त वर्षा र बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकाले प्रदेश २ मा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने सरोकारवालाहरूले आकलन गरेका छन् । कृषि विकास निर्देशनालय, नक्टझिजका निर्देशक डा. रतनकुमार झाले गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन १५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेका छन् ।
‘प्रदेश २ मा यस वर्ष पर्याप्त मात्रामा वर्षा भयो । धान खेतीयोग्य ९९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । धानमा कीरा वा अन्य रोगको संक्रमण पनि कम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण गएको वर्षभन्दा यस वर्ष धान उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश २ मा यस वर्ष करीब ४ लाख हेक्टर जमीनमा धानखेती भएको छ । गएको वर्ष ३ लाख ५७ हजार हेक्टर जमीनमा मात्र धानखेती भएको थियो । प्रत्येक वर्ष करीब ५० हजार हेक्टर जमीनमा चैते धानखेती हुने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश २ मा ७० प्रतिशत जमीनमा आकाशे पानीको भरमा धानखेती हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आउँदो हप्तासम्म पनि परेन भने धान उत्पादनको अनुमानित लक्ष्य हासिल नहुन पनि सक्छ ।’
यस्तै, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश २ का निर्देशक डा. रामवरण यादवले पनि गतवर्ष भन्दा यो वर्ष धान उत्पादन करीब १५ प्रतिशत बढ्ने आकलन गरेका छन् । उनका अनुसार गएको वर्ष ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन भएको थियो । तर यस वर्ष प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ७ मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै कुनै जिल्लामा प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुँदै आएको छ ।
धनुषा प्रदेशकै अब्बल
प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धान उत्पादन धनुषामा हुँदै आएको छ । गएको वर्ष धनुषामा प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । गतवर्ष चैते र असारे गरी जिल्लामा करीब ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भएको थियो । यस्तै करीब ६३ हजार १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा असारे धानखेती गरिएकोमा गतवर्ष २ लाख ५१ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो ।
‘अन्य जिल्लाको तुलनामा धनुषामा सिँचाइको उपलब्धता पनि बढी भएको छ । धानखेतीका लागि उर्वर भूमि पनि छ,’ यादवले भने, ‘सीमा नाकासँग जोडिएको हुनाले जिल्लामा मल अभाव हुनेबित्तिकै भारतबाट ल्याएर किसानले समयमै मल छर्छन् ।’ धनुषामा कमला, नक्टाझिज र सिर्सिया गरी तीनओटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । अन्य जिल्लामा प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भए पनि धनुषामा भने कम्तीमा ३ दशमलव ७ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ ।
डा. यादवका अनुसार धानखेतमा भइरहेको विषादी प्रयोगले पनि उत्पादन कम हुने गरेको छ । ‘लामो समय खडेरी भएपछि धानखेतमा घाँस बढ्न थाल्छ,’ उनले भने, ‘घाँस हातले हटाउनुको साटो किसानले विषादी प्रयोग गर्छन् । र, विषादी प्रयोगले उत्पादकत्वमा कमी आउँछ ।’ मुख्यतः रासायनिक मलको अभाव, अनियमित सिँचाइ, रोगकीराको प्रकोप लगायत कारण उत्पादकत्व घट्ने उनले बताए । तर, पछिल्लो समय अत्यधिक विषादी प्रयोगले उत्पादनमा कमी आएको उनको भनाइ छ । अत्यधिक विषादीको प्रयोगले माटोमा अम्लीयपन बढेपछि उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ ।
‘धानलाई रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर, उचित मात्रामा प्रयोग भइरहेको पाइएन,’ उनले भने, ‘किसानले खेतमा आवश्यकताभन्दा बढी मलखाद प्रयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसले बालीलाई तत्काललाई फाइदा गरेको देखिए पनि दीर्घकालमा ठूलो असर गर्छ ।’ एक कठ्ठा धानखेतमा ६ किलो युरिया र १ किलो पोटास छर्नुपर्नेमा धान चाँडै बढ्ने र बाला लाग्ने लोभमा किसानले मलको दोब्बर प्रयोग गर्दा उत्पादन कम हुने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै एकै जातको धानबाली निरन्तर लगाउने, खडेरी, बाढीको डुबान र बाला लाग्ने बेला सिँचाइ अभावले पनि धानको उत्पादन घट्ने गरेको उनले बताए ।